Dagaal Loogu Jiro Gacan ku Heynta Gobolka Marib Ee Yemen Oo Xoogeystay.(Sawiro) – Heemaal News Network
Dagaal Loogu Jiro Gacan ku Heynta Gobolka Marib Ee Yemen Oo Xoogeystay.(Sawiro)
Dagaalka loogu jiro gacan ku heynta gobolka muhiimka ah ee Marib ee dalka Yemen ayaa sii xoogeystay, iyadoo 24-kii saac ee la soo dhaafay ay ku dhinteen 53 dagaalyahan oo isugu jira ciidamada taabacsan dowladda iyo fallaagada Xuuthiyiinta.
Kooxda Xuuthiyiinta ayaa isku dayaysa inay la wareegto gobolka saliidda hodanka ku ah ee Marib.
“Fallaagadu waxa ay ku guuleysteen in ay xoogaa dhul ah ku qabsadaan” dagaalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waqooyi-galbeed magaalada, laakin magaalada kama jirto wax khatar ah, ilo millatari oo taageera dowladda ayaa sidaasi sheegay.
Ilo-wareedka ayaa sheegay in 22 ka tirsan ciidamada dowladda oo ay ku jiraan shan sarkaal la dilay, iyadoo 31 ka tirsan fallaagada ay ku dhinteen dagaalka.
Xuuthiyiinta ayaan sheegin tirada askarta uga dhinta dagaallada kooxdu qaaddo.
Kooxdan oo ay taageerto dowladda Iran ayaa sanadkii 2014 la wareegtay gacan ku haynta caasimadda Sanca oo 120 km dhanka waqooyi kaga beegan Marib.
Taasi ayaa keentay in isbahaysiga ay Saudi Arabia hoggaamiso uu bishii March ee 2015-kii soo farageliyo dagaalka si loo taageero dowladda.
Saraakiisha militariga ayaa Sabtida maanta ah sheegay in diyaaradaha isbahaysiga ay qaadeen duqeymo ka dhan ah fallaagada, laakiin Xuuthiyiinta ayaa sii xoojiyay weerarkooda.
Luminta gacan ku heynta Marib ayaa dharbaaxo culus ku noqon doonta dowladda Yemen ee fadhigeedu yahay magaalada koonfureed ee Cadan iyo isbahaysiga Sacuudiga.
Waxa ay sidoo kale horseedi kartaa musiibo bini’aadanimo, maadaama tiro aad u badan oo rayid ah oo ka soo barakacay dagaallo ka dhacay meelo kale oo dalka ah ay ku nool yihiin xeryo ku yaalla gobolka Marib.
Ku dhowaad 140 xero ayaa ka furan gobolka kuwaasi oo hooy u ah barakacayaal gaaraya ilaa laba milyan oo qof sida ay sheegtay dowladda Yemen.
Kooxda Xuuthiyiinta ayaa bilihii la soo dhaafay kordhisay weerarrada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ku qaaddo Saudi Arabia, iyadoo dalbaneysa in la furo dekedaha iyo hawada Yemen.
Armed Yemeni tribesmen from the Popular Resistance Committees, supporting forces loyal to Yemen’s Saudi-backed President Abedrabbo Mansour Hadi, fire heavy artillery as they hold a position southwest of the city of Marib, east of the capital Sanaa on Ocotber 10, 2015. AFP PHOTO / ABDULLAH AL-QADRY
Xukuumada Somaliland Oo ka Ganacsiga Sigaarka ka Mamnuucday Degmada Saylac Ee G/Salal.
Somaliland Oo ka Hadashay Dibu Doorashadii Madaxwayne Geelaha Jabuuti.
Dad ku Dhintay Rabshadaha ka Taagan Koonfur Afrika Oo Kordhay.(Sawirro)
Heemaall July 13, 2021
Iran Oo Iska Fogaysay Weerarkii Lagu Qaaday Markab ay Laheyd Israa’iil.
Heemaall August 1, 2021 August 1, 2021
Sanaroon Cilmi Oo ka Hadlay Khilaafka Wasaarada Ciyaaraha ka Shiday Ciyaaraha Awdal.